COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၆-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
၁။ (၆-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် -
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်အောင်နှင့် ဦးမျိုးတင့် တို့ပါဝင်သည့်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Covid ထက် မိမိတို့ကပိုပြီး အင်အားရှိတယ်၊ ပိုပြီးရှင်သန်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်ဆိုတာ ပြသနိုင်ဖို့ အားလုံးဆက်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုကြောင်း ရေးသားဖော်ပြ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Covid သက်တမ်းနှစ်တစ်ဝက် ကျော်ခဲ့ပြီး ရောဂါထက် မိမိတို့က ပိုပြီးအင်အားရှိတယ်၊ ပိုပြီးရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ပြသနိုင်ဖို့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပြည်သူတွေအားလုံး ဆက်ပြီးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါကြောင်း ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှ ယနေ့တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
Vol. VII, No.81, Monday,6July 2020
Vol. VII, No. 80, Sunday,5July 2020
Vol.VII, No. 74, Monday, 29 June 2020
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၈၄/၂၀၂၀ လုံးခင်း၊ဖားကန့်ရတနာနယ်မြေအတွင်း မြေပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း